Voadika ny 23 Desambra 2012 1:43 GMT
Colombo, renivohitr'i Sri Lanka dia malaza ho maitso mitaha amin'ny ankamaroan'ireo tanàn-dehibe any Azia Atsimo, noho ireo zava-maniry sy hazo maniry eny amoron-dàlana. Nandritra ny herinandro farany tamin'ny volana Novambra anefa, maro ireo hazo antitra nanamorona ny Reid Avenue no notapahan'ireo manampahefàna. Ny sasany tamin'ireo hazo ireo no efa nahatratra 100 taona mahery ary natao hamoronana ‘tanànan-jaridaina’ tany Colombo. Niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana goavana tany an-toerana ireo hazo nianjera ireo. Mizara ny alahelony i Subha Wijesiriwardena :
Manohitra ny fikapàna hazo ao amin'ny Reid Avenue, Colombo. Sary avy amin'ny Twitpic an'i Dushiyanthini. Misy sary maromaro kokoa ao amin'ny bilaogy Passion Parade.
Maherin'ny zato ireo olona nijoro nilanja baoritra misy soratra tany amin'ny arabe lehibe maro any Colombo mba ho fandraisana anjara amin'ny tolona mangina. Tany i Savan ary manoratra ao amin'ny Yamu: